Kooxda Barcelona oo horumar ka sameysay raacdadii ay ugu jirtay xiddig ka tirsan Juventus – Gool FM
(Barcelona) 03 Maajo 2020. Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay horumar la taaban karo ka sameysay raacdadii ay ugu jirtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Juventus, Miralem Pjanic.
30-sano jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed cajiib ah ku soo qaatay kooxda haysata horyaalka Talyaaniga intii lagu jiray xilli ciyaareedka 2019-20, isagoo dhaliyay saddex gool afar kalena caawiye ka noqday 32 kulan oo uu saftay.
Hadda waxaa jira warar la isla dhexmarayo oo sheegaya mustaqbalka xiddiga heerka caalami ee xulka Bosnia-Herzegovina, laakiin warbixin dhowaan la soo saaray ayaa sheegay inuu ku riyoonayo ku biirista kooxda haysata horyaalnimada Spain.
Sida laga soo xigtay Marca, qorshayaasha Barca ee ku aaddan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe oo loo arkaa mid ku qumman kooxda ka hor furitaanka suuqa kala iibsiga xagaagan.
Warbixinta ayaa sheeganaysa in kooxda reer Catalan ay weli u baahan tahay inay kala xaajoodaan qiimaha Pjanic, laakiin kooxda ayaa kalsooni ku qabta inay heshiis ka gaari karto xilli ciyaareedka 2020-21.
Da’yarkii hore ee kooxda Metz oo qandaraas kula jira kooxda Maurizio Sarri ilaa iyo bisha June ee sanadka 2023 ayaa ku guuleystay saddex horyaal oo Serie A ah iyo labo Coppa Italia tan iyo markii uu yimid Magaalada Turin.